Uncategorized – ZEUS Myanmar
MCU ရဲ့ ပထမဆုံး Deaf hero ၂ ယောက် Makkari နဲ့ Echo
No Comments on MCU ရဲ့ ပထမဆုံး Deaf hero ၂ ယောက် Makkari နဲ့ Echo
MCU ကတော့ လမ်းသစ်တွေကိုဖောက်နေဆဲပါပဲ။ Comic ထဲကဇာတ်ကောင်တွေကိုလဲ Live-action အဖြစ်နည်းမျိုးစုံ ဖော်ပြနေတဲ့အပြင် Support တဲ့နေရာမှာလဲ ထိထိမိမိချပြနိုင်အောင် ကြိုးစားနေတာတွေ့ရပါတယ်။ တလောက Eternals ရုပ်ရှင်တုန်းကလဲ Gay family ၁ ခုကိုထည့်သွင်းရိုက်ပြခဲ့ပြီး Worldwide release မှာ Censor ၁ ခုမှမဖြတ်ပဲ ထုတ်ချလိုက်လို့ တချို့နိုင်ငံတွေရဲ့ Ban ခြင်းကို ခံလိုက်ရတာ သိပြီးကြမှပါ။
အခုဆိုရင်လဲ Deaf သရုပ်ဆောင်တွေကိုပါ စတင်ပွဲထုတ်နေပြီဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်က MCU မှာစတင်ပါဝင်လာတဲ့ Deaf Hero တွေဖြစ်တဲ့ Makkari နဲ့ Echo တို့နေရာ သရုပ်ဆောင်တွေအကြောင်းအကျဥ်းလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Makkari ကတော့ Eternals ထဲက ၁ ယောက်ဖြစ်ပြီး Superhuman speed နဲ့ hero ၁ ယောက်ပါ။ Makkari နေရာမှာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကတော့ Lauren Ridloff ဖြစ်ပြီး သူမဟာ မွေးရာပါနားမကြားတဲ့ American Actress ၁ ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ The Walking Dead series ကနေ စတင်လူသိများခဲ့တာဖြစ်ပြီး Eternals ရုပ်ရှင်ထဲမှာလဲ သူ့နေရာ ၁ ခုကို ပေါ်လွင်အောင်သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ချီးကျူးလောက်တဲ့ Actress ၁ ယောက်ပါ။
Eternals ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတုန်းကလဲ သူမအတွက် အခက်အခဲတွေရှိခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင် crew တွေရဲ့ကြိုးပမ်းပေးမှုကြောင့် အဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့လဲ သိရပါတယ်။ Eternals ရဲ့ Set တစ်ခုမှာဆိုရင် နံရံကို မျက်နှာမူရမယ့် Scene ၁ ခုပါလာခဲ့ပြီး သူမအတွက် Timing ကို အခက်အခဲဖြစ်နေချိန် မမ Angelina Jolie က သူမအတွက် အချက်ပြဖို့ လေဆာ dot လေးသုံးပြီး ရိုက်ကူးဖို့ Idea ပေးခဲ့ပြီး crew တွေကဖန်တီးပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Echo ကတော့လက်ရှိ #Hawkeye series မှာ စတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပြီဖြစ်ပြီး သူမဟာ Kingpin ကြီးရဲ့ မွေးစားသမီးဖြစ်ပါတယ်။ Echo ဟာ Deaf character ၁ ယောက်ဖြစ်ပြီး သူမနေရာကို သရုပ်ဆောင်သွားမယ့်မင်းသမီးကတော့ Alaqua Cox ဖြစ်ပါတယ်။ Alaqua ဟာလဲ Deaf Native American သရုပ်ဆောင် ၁ ယောက်ဖြစ်ပြီး ညာဘက်ခြေထောက်မရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ နားမကြားတာကတော့ မွေးရာပါဖြစ်ပြီး ညာခြေထောက်ကတော့ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာကို သူမဘက်ကထုတ်ဖော်မပြောကြားထားပါဘူး။
#DisneyPlusDay မှာတုန်းက ကြေညာသွားတဲ့ သူမရဲ့ နာမည် #Echo Title နဲ့ own series ၁ ခုကလဲ လာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုတော့ သူမက… “အဲ့ဒါကတကယ်ရူးချင်စရာပဲ.. ကျွန်မက Hawkeye လဲရိုက်ပြီးရော ကျွန်မအတွက် ကိုယ်ပိုင် show ၁ ခုကိုရလိုက်တယ်။ ဒါကအခုမှ ကျွန်မရဲ့ ပထမဦးဆုံး သရုပ်ဆောင်ရတဲ့ role ၁ ခုပါ” ဆိုပြီး Variety နဲ့ Interview မှာပြောသွားပါတယ်။
သူမရဲ့ သရုပ်ဆောင်ခရီးစဥ်အစကတော့ Echo ဖြစ်ပြီး #Hawkeye series ထဲမှာတော့ ညာခြေထောက်အတုတပ်ကာ သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Daredevil ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Echo ကိုသိကြမှာပါ။ Supervillain ကြီး Kingpin ဟာ Echo(Maya) လေးရဲ့အဖေကိုသတ်ပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ Echo လေးကိုမွေးစားခဲ့ပါတယ်။ မွေးစားခဲ့တာဟာ Echo အတွက်နာကျည်းစရာပါပဲ ဘာလို့ဆို သူမအဖေအသတ်ခံရတာကို သူမမြင်ခဲ့လို့ပါ။ Kingpin ကြီး ဘာကြောင့်မွေးစားခဲ့လဲဆိုတော့ Echo ရဲ့ photographic reflexes Ability ကို သဘောကျသွားလို့ပါ။ သူမရဲ့ Ability ကြမ်းတာကလဲ အရာ ၁ ခုကို ၁ ကြိမ်တည်းကြည့်ယုံနဲ့ အတုယူနိုင်လို့လဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (ဟုတ်ပါတယ်… Taskmaster လိုပါပဲ! ဘယ်သူပိုကြမ်းလဲဆိုတာကတော့ ကျွန်တော့်အမြင် comic ထဲမှာတော့ Taskmaster ကပိုကြမ်းပါတယ်။ ဘာလို့ဆို Echo ဟာ deaf ၁ ယောက်ဖြစ်ပြီး Taskmaster ဟာလဲပိုပြီး fight တာတွေကို copy နိုင်လို့ပါ။)
ထို Echo လိုဇာတ်ကောင်အတွက်လဲ Alaqua ဟာ Training တွေတော်တော်လုပ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့ ပြင်းထန်စွာ body building လုပ်နေတဲ့ Video ကိုလဲချပြခဲ့ပါသေးတယ်။ သူမဟာ Marvel Studios မှ Deaf American actress တွေရှာတယ်နေလို့ သူငယ်ချင်းလာပြောလို့ Audition ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Hawkeye series ရဲ့ casting ကိုမတွေ့သေးခင်အထိ သရုပ်ဆောင်တာစိတ်မဝင်စားခဲ့ဖူးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ Entertainment Weekly နဲ့ Zoom မှာတော့ Alaqua ဟာ…”ကျွန်မလို မသန်မစွမ်းသူတွေလဲ ဘာမဆို လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ ချနိုင်တယ်၊ လှန်နိုင်တယ်၊ လဲနိုင်ပါတယ်။ လူတွေက ‘ဝိုး၊ သူမ ဒါကိုလုပ်နိုင်ပါလား’ ဆိုပြီး ပြောကြမှာကို စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
တကယ့်ကို Honor အပြည့်နဲ့ပါပဲ။ လက်ရှိ MCU ရဲ့ နှစ်ယောက်တည်းသော Deaf သရုပ်ဆောင်တွေဆိုပြီး Alaqua ဟာ Eternals ထဲက Lauren Ridloff နဲ့အတူ ပုံလေး ၁ ပုံကိုလဲ သူမရဲ့ IG acc မှာတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ MCU ရဲ့နောင်လာမယ့် project တွေမှာလဲ ဆက်လက်ပါဝင်သွားကြဦးမှာမို့ သူတို့ရဲ့ကြိုးစားချပြမှုတွေကိုလဲ စောင့်ကြည့်သွားရပါဦးမယ်။
2022 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ ထွက်လာနိုင်တဲ့ Ms . Marvel Series
No Comments on 2022 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှ ထွက်လာနိုင်တဲ့ Ms . Marvel Series
ဒီနှစ် January မှာ MCU ဟာ ပထမဆုံး series အဖြစ် WandaVision နဲ့ စတင်ပြသခဲ့ပီး November 24 မှာတော့ Original Avengers ထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hawkeye Series အပါအဝင် series ငါးခုအထိပြသဖို့စီစဥ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Marvel ရဲ့ပထမဆုံး Muslim representation hero ဖြစ်တဲ့ Ms.Marvel ဟာ အစက ဒီနှစ် November မှာ ပြသဖို့စီစဥ်ထားခဲ့ပီး Hawkeye series ကိုပြသဖို့ကြေငြာလိုက်တာကြောင့် 2022 အထိနောက်ဆုတ်သွားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Ms.Marvel series ရဲ့ actor တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mohan Kapur ကတော့ Ms.Marvel series ကို ”June,Junly လောက် ထွက်ဖို့မျှော်လင့်ရတာပဲလို့” twitter reply တစ်ခုမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Ms.Marvel ဟာ 2022 November မှာထွက်မဲ့ Captain Marvel ရဲ့ sequel ဖြစ်တဲ့ The Marvel မှာ ပါဝင်သွားဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
No Way Home နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာအချိူ့ကို ဖွင့်ပြောလာတဲ့ Tom Holland
No Comments on No Way Home နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာအချိူ့ကို ဖွင့်ပြောလာတဲ့ Tom Holland
MCU ရဲ့ spidey မင်းသားလေး Tom Holland ကတော့ လတ်တလောပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview မှာ No Way Home နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ချိူ့ကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
No Way Home ရဲ့ villain ဖြစ်လာမယ့် Doc Ock မင်းသား Alfred Molina နဲ့ ရိုက်ကွင်းမှာ အလုပ်အတူတူလုပ်ရတာကိုလည်းအလွန်နှစ်သက်ကြောင်းနဲ့ နည်းပညာတွေတိုးတက်
လာတာနဲ့အညီ လိုက်လျောညီထွေ သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Alfred Molina ရဲ့ acting တွေကိုလည်း ချီးမွမ်းထားပါတယ် ။
အဲ့အပြင် No Way Home နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောထားတာကတော့ ဒီဇာတ်ကားဟာ MCU spider-man trilogy အတွက် နောက်ဆုံးသော solo movie တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတယ်လို့လည်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောထားပါသေးတယ် ။
” ရိုက်ကွင်းက လူတွေနဲ့ ငါတို့အားလုံးက No Way Home ကို ဒီ franchise ရဲ့ နောက်ဆုံးသော ကားအဖြစ်နဲ့ သဘောထားပြီး ရိုက်ထားကြတာပါ ။ တကယ်လို့ ဒီဇာတ်ကောင်တွေကို နောက်ထပ် ထပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်တောင် အရမ်းကွဲပြားတဲ့ ပုံစံမျိူးတွေနဲ့ မင်းတို့ မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ ငါထင်တယ် ။ ငါဆိုလိုချင်တာက ဒါက Homecoming Trilogy မဟုတ်တော့ဘူးလေ ။ ဒါက အဆုံးသတ်သွားပြီ ။ ဒီတော့ ငါထင်တာက သူတို့တွေ တခြားမတူညီတဲ့အရာအသစ်အဆန်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ဖို့အတွက် ဖြစ်လိမ့်မယ် ။ ဒီအရာက ဖြစ်လာနိုင်မနိုင်တော့ ငါလည်း သေချာမပြောနိုင်ဘူး ။ ဒါပေမယ့်လည်း ငါတို့အားလုံးကတော့ No Way Home ဟာ ဒီ franchise ကြီးရဲ့ အဆုံးသတ် ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လုပ်ကိုင်နေကြရတယ် ။ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါက
တကယ့်ကို အဲ့လို ခံစားရပါတယ် ။ ”
COMIC Marvel Uncategorized
အကယ်၍များ Tony Stark သာ Sorcerer Supreme ဖြစ်ခဲ့ရင်?
No Comments on အကယ်၍များ Tony Stark သာ Sorcerer Supreme ဖြစ်ခဲ့ရင်?
Doctor Strangeနဲ့ Tony Stark တို့ဆိုတာ Avengers တွေရဲ့ A-List Superheroတွေပါ။ marvel illuminati ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ greatest Avengers တွေဆိုလည်းမမှားပါဘူး။
အကယ်၍များ Stephen Strangeက Sorcerer Supreme မဖြစ်ခဲ့ရင်ရော? သူ့အစား Tony Stark က Sorcerer Supremeဖြစ်ခဲ့ရင် ဘယ်လို Story မျိုးဖြစ်လာမလဲ?
ဒီstroyဟာ marvel ရဲ့နာမည်ကြီး comic eventတစ်ခုဖြစ်တဲ့ What if? One shot comic တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ ဒီ comic ရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါမယ်။
.Genius Play Boy Tony Stark နဲ့ Stephen Strange တို့ဟာ မိတ်ဆွေတွေပါ။ tony နှင့် doctor Strange တို့ရဲ့ မူလအစဘဝတွေဟာ earth-616 ကနှင့်တူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
Tony Starkဟာလည်း တီထွင်ကြံစ ဖန်တီးမှုတွေမှာတစ်ဖက်ကမ်းခတ်သလိုပဲ Stephen Strangeဟာလည်း ဆေးဝါးလောရဲ့ ခွဲစိတ်ရေးမှာ ထိပ်ဆုံးမှာတည်ရှိပါတယ်။တစ်ခုပါပဲ Strangeဟာ အင်မတန်မှ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ပြီး အမှားအရွင်းလုံးဝမခံတတ်ပါဘူး။ operationခန်းမှာ Nurse တွေစကားပြောရင်တောင်မကြိုက်တဲ့သူမျိုးပေါ့။
Tony နှင့် Stephen Strange တို့ဟာ party ပွဲတစ်ခုမှအပြန် dizzy ဖြစ်နေတဲ့ tony ကကားမောင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့အချိန်မှာပဲမတော်တဆမှုကြောင်းကားမှောက်ခဲ့ပြီး Tony ရော Doctor Strangeရော ဒဏ်ရာအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ Strange ဆေးရုံမှာနိုးလာတဲ့အခါ သူ့ရဲ့လက်တွေက nerve damage ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ Operate လုပ်လို့ပင်မရတဲ့အခြေအနေပါ။
Strange ဟာ Tony ကိုဒေါသထွက်ပြီး ဒီလိုဖြစ်ရတာ Tony ကြောင့်ဆိုပြီး ဒေါသကြီးစွာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Tony ဟာလည်း သူ့ရဲ့ ဘော်ဒါ Strange ကို ဘယ်နည်းလမ်းနှင့်မဆို သူရအောင် ပြန်ကူညီပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ tony starkဟာ strange အတွက် machine တွေကိုတီထွင်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှအလုပ်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ထို့နောက် super modelတွေအလှပဂေးတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီး ဒဏ်ရာကိုမေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အလုပ်မဖြစ်ပြန်ပါဘူး။
အဲ့နောက်မှာတော့ Strangeနှင့် Tony တို့ဟာ တိဘက်ကိုသွားပြီး ကူညီဖို့တတ်နိုင်တဲ့သူရှိရာကိုသွားခဲ့ပါတယ်။
တိဘက်ရဲ့နှင်းတောင်တန်းတွေကြားမှာကျောင်းတော်ကြီးရှိပါတယ်။ ထိုကျောင်းတော်ကြီးမှာ Ancient One နေထိုင်ပါတယ်။
Ancient One ဟာလည်းသူမကူညီနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Ancient One ဟာ Mystic Arts ‌ကိုသင်ယူဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။ Mordo ကို သင်ခိုင်းစေခဲ့တယ်။ tony ဟာ Mordo က Ancient One ကို ကျိန်စာတိုက်ဖို့ကြိုးစားနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။spell တစ်ခုကြောင့် tony ကသူမြင်ခဲ့သမျှကို ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။
Ancient One က Tony ကို trian ပေးခဲ့ပြီး Mordo ကိုအနိုင်ယူပြီး Earth ရဲ့ Sorcerer ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ Strangeကတော့ ဒီအရာတွေအကုန်လုံးက Tony မှာတာဝန်ရှိတယ်ခံယူထားပြီး Mystic Art ကိုလည်းမလေ့လာခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ Tony Stark Sorcerer Supremeနှင့် Stephen Strange တို့ဟာ partner တွေဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ Doctor Strange နဲ့ Wong လိုပုံစံမျိုးပေါ့။
Tony ကလည်း Strange ရဲ့လက်ပြသာနာကို ဖြေရှင်းဖို့အမြဲကြိုစားနေခဲ့ပါတယ်။
တစ်‌နေ့မှာတော့ Dormamuuရဲ့ Dark Dimension က Troops တွေက Earth ကိုကျူးကျော်‌တော့မှာကို Tony ကလှမ်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ Earth ဟာ Dark Dimensionဟာ Dormamuuရဲ့စစ်တပ်တွေ တိုက်ခိုက်တာကိုခံရတော့မှာပါ။
Tony ဟာလည်း သူ့ရဲ့Mystic Armor ကို ယူပြီးတိုက်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ Tony ရဲ့ Armor ဟာ Dimension တစ်ခုက materialနှင့်ပြုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး magic နဲ့ tech ကိုပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ tony ဟာ Sorcerer Supreme လည်းဖြစ်သလို Geniu lvl လည်းဖြစ်တာကြောင့် တကယ်ကိုရူးသွပ်စရာတီထွင်မှုတွေနဲ့ powerful armor ကိုဖန်တီးထားတာပါ။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ Tony ဟာ Dormamuu ရဲ့ Dimension ထဲကို ဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲ့နောက်မှာတော့ Dormamuuရဲ့ နန်းတော်ထဲကိုရောက်ပြီး Dormamuuရဲ့ လက်ရွေးစင်တွေနဲ့ချခဲ့ပါတယ်။ Tony ရဲ့ Suit ဟာ ရန်သူရဲ့ တိုက်ကွက်ကိုကြိုမြင်တဲ့အပြင် အားနည်းချက် အားသာချက်ကိုပါ တစ်ခါတည်းပြသတာမလို့ တစ်ဖက်ရန်သူတွေဟာရှူံးကုန်ပါတော့တယ်။
Dormamuuနှင့် Tony တို့ Battleမှာလည်း Dormamuu ဟာ tony ရဲ့ suit ကိုမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ မထင်မှတ်ထားတာတစ်ခုက tony ရဲ့ suit ကို ယူဖို့ Doctor Strangeဟာ Dormamuuကိုကူညီပေးလိုက်တာပါပဲ။
Tony ကို Betrayလုပ်ပြီး Strange ဟာ Dormamuuကိုကူညီပြီး သူ့ရဲ့လက်တွေကို ပြုပြင်စေခဲ့ပါတယ်။
ဒီတော့ Earth ရဲ့ protectorဖြစ်တဲ့ Tony မရှိတဲ့အခါမှာ Dormamuuဟာ Earth ကိုအင်အားတစ်လုံးတစ်ခဲနှင့်စစ်ချီရန်ပြင်ပါတော့တယ်။
နန်းတော်ထဲမှာတော့ Tony ကဖမ်းခံထားရပါတယ်။ Strange ကတော့ မထင်မှတ်ပဲ Clea( Dark Dimension Sorcerer) Dormamuu ရဲ့သမီးနဲ့တွေ့ခဲ့ပါတော့တယ်။ Strange ကို Clea က Dormamuu ဟာ Mindless One ဆိုတဲ့ Creature တွေကို Dark Dimensionရဲ့ Outskirt မှခေါ်ယူပြီး Earth ကိုဖျက်စီးပစ်တော့မယ်ဆိုတာကိုအသိပေးပါတော့တယ်။ဒီ‌တော့ Strange ဟာလည်း ဒီအတိုင်းဆိုရင် Tony ကိုကယ်မှရမယ်‌ဆိုပြီး ကယ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒီ Dark Dimensionထဲက အဖြစ်အပျက်တွေကို Ancient One ကကြည့်ပြီးပြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့ပြုံးနေတာလဲဟူ၍ အနားမှာရှိတဲ့ တပည့်ကမေးတော့ ငါတို့ တကယ့် Doctor Strange ကိုမြင်ရတော့မှာပဲလို့ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။
Clea ဟာ Dormamuuမရှိတဲ့အချိန်မှာ Strangeနှင့် အတူ Tony ရဲ့ Armor ကိုယူပြီး Strange ကဝတ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Tony ကိုကယ်ဖို့သွားပါတော့တယ်။ Tony ကိုကယ်ပြီးနောက်မှာ Tony ဟာ Dormamuuက Strangeရဲ့လက်ကိုမမြင်ရတဲ့ Creatureတွေကပ်ထားပြီး အသက်ကိုစုပ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ကိုလှုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာ ခဏတာပါ။
Strange ဟာ Tony ကို Armor ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Tony ဟာလည်း Dormamuuကို တားဖို့ သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေက dune ထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက် Dormamuuကြီးကို Astral Plane Fight ကိုစိန်ခေါ်ပါတယ်။ Dormamuuကလည်း လက်ခံပြီး body တွေကိုထားပြီးနှစ်ယောက်သား Astral ချင်းချနေတာပေါ့။
Tony ရဲ့ Body က Armor ဟာ Dormamuu body ကိုဆွဲပြီး မရည်မတွက်နိုင်တဲ့ Dimensionသန်းနဲ့ချီကို ဖြတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ computerကလည်း Dimensionကို Random ရွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ Dormamuuကြီးခဗျာ tony လှည့်စားတာခံရပြီး စိတ်နဲ့ကိုယ်က dimensionသန်းနဲ့ချီ ဝေးကွာသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ ဒေါသကြီးစွာနဲ့ Dormamuuကြီးဟာလည်း ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ Dormamuu ပြန်လာဦးမှာပါ။ဒါဟာအဆုံးသတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို Tony Starkသိနေခဲ့ပါတယ်။
အဲ့နောက်မှာ Tony ဟာ Earth ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေ Stephen Strange ကတော့ Dark Dimension မှာသာနေခဲ့ပြီး Clea နဲ့ဘဝသစ်တစ်ခုကိုစခဲ့ပါတော့တယ်။Tony က ပြန်လိုက်ဖို့ လက်ကိုကုပေးဖို့ပြောပေမဲ့လည်း Strange ကတော့ အဆင်ပြေနေပြီမလို့ လက်မခံခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့သူတို့ရဲ့ ခင်မင်မှုကအဆုံးသတ်ပြီး တစ်ယောက်တစ်နေရာဆီအဆင်ပြေပြေနှင့်သာနေထိုင်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
ဒီ what if ? က classic what if Seires ထဲမှာကျနော်အကြိုက်တစ်ခု‌ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ဖတ်ရတာအနှစ်သာရရှိပါတယ်။
ဒီဟာဖတ်ပြီး one question change everything ဆိုတဲ့ အတိုင်း marvel characterတွေအတွက် ကိုယ်ပိုင် ဇာတ်လမ်းကို အတွေးနယ်ချဲ့ပြီးဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။
(zeusmyanmar.com မှ Content များကို ပြင်ပ Social media platform များသို့ ပြန်လည် ကူးယူဖော်ပြခွင့် မပြုပါ။)
Eternals ထဲမှာ villain အဖြစ် ပါဝင်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Dan Stevens
No Comments on Eternals ထဲမှာ villain အဖြစ် ပါဝင်လာဖို့ရှိနေတဲ့ Dan Stevens
Marvel ရဲ့ အကောင်းဆုံးနဲ့ rating အမြင့်ဆုံး series တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Legion ကိုတော့ သိကြလောက်မယ်ထင်ပါတယ် ။ အခုတလော ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ interview တစ်ခုမှာတော့ Eternals movie နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ rumors တွေကို မေးမြန်းရာမှာ Legion actor Dan Stevens က အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
Interviewer – အာ.. ငါမင်းကို မေးချင်တာက Eternals မှာ ပါဝင်မယ်လို့ သတင်းထွက်နေတဲ့ မင်းရဲ့ secret role နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာများပြောချင်သလဲ
Dan Stevens – ငါ့ထင်မြင်ချက်ကတော့ Kro ပါ ။
Interviewer – Wait What? ?? မင်း ဒီအကြောင်းကို သေချာပြောပြပေးလို့ရမလား?
Dan Stevens – ငါပြောပြီးပြီပဲလေ ။ ဒါက မင်းရဲ့ မေးခွန်းကို သေချာ ဖြေပေးနိုင်မလဲဆိုတာတော့ မသိပေမယ့် တကယ်လို့ ငါ ဒီအကြောင်းတွေကို ပြောခွင့်ရှိခဲ့ရင်တောင်မှ ငါပြောလောက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ။
ဒီအကြောင်းအရာကတော့ marvel က တရားဝင် confirm မဖြစ်သေးပေမယ့် internet တစ်ခွင်မှာတော့ တော်တော်လေး hit ဖြစ်နေပါပြီ ။ Dan Stevens တစ်ယောက် စနောက်ပြီးများ
ပြောလိုက်သလား တကယ်အတည်ပဲ ပြောနေသလားဆိုတာကိုတော့ movie ထွက်မှပဲ သိရတော့မှာပါ ။
တကယ်လို့သာ ဒီသတင်းက အမှန်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Dan Stevens သရုပ်ဆောင်ရမယ့် role က Eternals ရုပ်ရှင်ရဲ့ အဓိက main villain ကြီး Kro နေရာက ပါဝင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Kro ဆိုတာကတော့ Eternals တွေရဲ့ ရန်သူ Deviants တွေကို ဦးဆောင်တဲ့ Deviant ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး Thena (Angelina Jolie) နဲ့လည်း comic ထဲမှာ ချစ်ကြိုက်ဖူးခဲ့
ကြပါတယ် ။ trailer ထဲမှာလည်း Thena နဲ့ Kro ကို တွဲ
မြင်ရတော့ သူတို့ကြားက relationship ကိုလည်း movie ထဲမှာ မြင်တွေ့ကောင်းမြင်တွေ့ရနိုင်ပါတယ် ။
Eternals ကတော့ Cast တွေနဲ့တင် တော်တော်ကြီး strong ဖြစ်နေပြီလို့တောင် ပြောလို့ရပါတယ် ။ တကယ့် ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ တွေကိုပဲ ရွေး ပြီး cast ထားတာပါ ။
ဒီလို MCU ရဲ့ အဖက်ဖက်က ပြည့်စုံနေတဲ့ Eternals ရုပ်ရှင်ကတော့ November5ရက်နေ့မှာ worldwide အားဖြင့်
စတင်ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
Character Info Marvel Uncategorized
Adam Warlock အကြောင်း ( Story & Info)
No Comments on Adam Warlock အကြောင်း ( Story & Info)
Marvel ရဲ့နာမညျကွီး Cosmic Hero တဈယောကျဖွဈတဲ့ Adam Warlockဟာ Guardian Of The Galaxy Vol.2 မှာတကညျးက hit ပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီတော့ ဒီHero ဟာ MCU ထဲကိုရောကျလာတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ သူ့ရဲ့ ဖွဈတညျလာပုံတှေ စှမျးအားတှနေဲ့ သူလုပျခဲ့တဲ့အကွောငျးအရာတှကေိုအကယြျအးတဝင့ျဖောျပွပေးလိုကျပါတယျ။
Adam Warlock / Warlock / Him / Magus (Earth-616)
Adam Warlock ရဲ့နာမညအှရငှးက Him ပဲဖှဈပါတယှ။
Him ဆိုတာ သူ့ရဲ့နာမညအှရငှးပါ။ Him ဆိုတဲ့နာမညနှဲ့ Fantastic four #66-67 (sept-oct 1967) မှာစတငပှါဝငခှဲ့တာဖှဈပါတယှ။
Adam ကို နာမညကှှောကှှီး၂ယောကဖှှဈတဲ့ Stan Lee နဲ့ Jack Kirby တို့ကဖနတှီးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။
Adam ဆိုတဲ့နာမညနှဲ့ကတော့ Marvel Premiere #1 (april 1972)မှာ စတငခှေါခှဲ့တာဖှဈပါတယှ။
Adam ဆိုတဲ့နာမညနှဲ့ပှနလှညဖှနတှီးခဲ့တာကတော့ Ray Thomasနဲ့ Gil kane တို့ကပှနလှညဖှနတှီးပေးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။
Origin အနနေဲ့ Fantastic Four 1967 မှာ စတငပှါဝငခှဲ့တာပါ။ သူ့ကို Enclave ဆိုတဲ့ သိပပွံရှငအှဖှဲ့ကနေ သူ့ကိုဖနတှီးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။
Enclave ဆိုတာကတော့ သိပပွံပညာရှငတှှေ ပါဝငတှဲ့အဖှဲ့လေးတဈခုဖှဈပါတယှ။ bas ကတော့ Earth မှာဖှဈပါတယှ။
Enclave မှာ အဖှဲ့ဝှဲ့ဝငလှေးယောကရှှိပှီး ထူးခှှနထှကမှှကတှဲ့သိပပွံပညာရှငတှှပေါ။အဲ့လေးယောကကှတော့
Maris Morlak( Nuclear physicist)
Jerome Hamilton ( medical biologist)
Carlo Zota(electronics technician)
Wladyslav Shinski ( Polish Geneticist) တို့ပဲဖှဈပါတယှ။
တဈယောကှ တဈမှိုး ကိုယကှှှမှးကငှတှဲ့ area မှာထူးခှှနပှှောငမှှောကတှဲ့ သိပပွံပညာရှငတှှပေါ။ သူတို့တှစေုံတှေ့မိတ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ big plan ကိုစပါတော့တယှ။ Plan စီစဉပှှီးမကှာခငမှှာ ထို၄ဦးဟာ သခငှဟှနေဆှောငပှှီး အရိပအှယောငပှှောကသှှားပါတော့တယှ။
သူတို့တှဟော သူတို့တှဟော Atlantic Ocean ရဲ့ ကှှနှးငယလှေးတဈကှှနှးပေါမှှာပှနလှညတှှေ့ဆုံခဲ့ကှပါ။ သိပမှကှာခငမှှာပဲ သူတို့ဟာလုံခှုံစိတခှရှအောငဆှိုပှီးBase တဈခုတညဆှောကခှဲ့ပါတယှ။
တညဆှောကပှှီး အဲ့ Base ကို Beehive လိုအမညပှေးပှီး BeeHive အတှငှးမှာ သူတို့အလုပကှိုဆကလှုပခှဲ့ပါတယှ။
အခှိနမှှားစှာ beehive အတှငှးစမှးသပမှှုမှားစှာလုပပှှီးတဲ့နောကမှှာတော့ Beehive ဟာ ကမဘွာပေါမှှာ အကောငှးဆုံးထဲကတဈခုResearch တဈခုဖှဈလာခဲ့ပါတယှ။
သူတို့ဟာ စကပှဈစညှးတှေ မှားစှာတီထှငခှဲ့တဲ့သူတှပေါ။သူတို့ရဲ့ရညရှှယခှကှကှ ကမဘွာပေါမှှာစှမှးအားအရှိဆုံး human race တဈမှိုးကိုတီထှငခှငှတှာပါ။လူသားDNA နဲ့သကရှှိကိုဖနတှီးဖို့သိပပွံနညှးပညာမှားစှာနဲ့ဖနတှီးခဲ့ကှတယှ။ သူတို့ဟာ ထူဆနှးတဲ့လူတှကေိုဖနတှီးခဲ့ပါတယှ။
Generator မှားစှာနဲ့ ထို Human New race plan ကို boost လုပခှဲ့ပါတယှ။အဲ့ဟာမလုပခှငမှှာလဲ ထိုလေးယာကကှ Teleport machine တှကေိုလဲထှငခှဲ့ပါတယှ။ အောငမှှငပှှီးမကှာခငမှှာပဲ Him ထှကပှေါလှာခဲ့ပါတယှ။ Him ဆိုတဲ့နာမညကှိုသူကိုယတှိုငပှေးခဲ့တာဖှဈပါတယှ။
ကမဘွာပေါကှထှကခှှာသှားပှီးနောကမှှာသူဟာ Space ထဲမှ ထူးဆနှးတဲ့ space Trapတဈခုကိုမိသှားခဲ့ပါတယှ။ Space Trap ကို Elder of the universe ဖှဈတဲ့ The Watcher ဆိုတဲ့ Elder တဈဦးကလုပထှားတာဖှဈပါတယှ။
Him ကိုတှေ့ပှီးနောကမှှာသူ့ရဲ့ စှမှးအားတှေ အကှိုးပှုနိုငတှဲ့အရာတှမှေားနတောကှောငှ့ The Watcher က သူလာခဲ့တဲ့နရောကိုကှညှ့လိုကတှဲ့အခါ Earthဖှဈနတယှေ။
အဲ့တာနဲ့ the watcher ဟာ Him ကို ကမဘွာပေါကှို ပှနပှို့ခဲ့တယှ။ သို့ပမယှေ့ သူ့မိနတေဲ့ Space trapမပှသေေးပါဘူး။ ထို့နောကမှကှာခငမှှာ Thor,Lady Sif တို့နဲ့ ကမဘွာပေါမှှာစုံကှပါတော့တယှ။
Thor နှင့ှ မိနှးမလုတိုကပှှဲ
အဲ့နောကမှှာ himကthor ကိုသူဖှဈတညလှာခဲ့ပုံကိုပှောပှပါတယှ။ထို့‌ နောကသှူအထီးကနှကှှောငှးပှောပှီးတော့ thor နဲ့သတို့သမီးလောငှး Lady sif ကိုသူ့ကိုပေးဖို့တောငှးဆိုပါတယှ။၊
thor ကလကမှခံဘူးလို့ပှောပါတယှ။ (ဟုတတှယှ လကခှံခငှစှရာလား :3) thor ငှငှးဆိုလိုကတှဲ့နောကမှှာ သူဟာ Thor ကိုစတငတှိုကခှိုကပှါတော့တယှ။ Mjolnir နဲ့တောငှ Him ကိုထိခိုကအှောငလှုပလှို့မရပါဘူး။ Himက Thor လဲနခှေိနှ Lady Sif ကိုမပှီးခိုးပှေးပါတော့တယှ။ Thor လိုကတှားပမေဲ့မရတော့ပါဘူး။
Thor ဟာ Himသှားတဲ့နောကကှိုအခကအှခဲမှားစှာနဲ့လိုကခှဲ့ပါတယှ။ thor ရဲ့ mjolnir ဟာhimအပေါမှသကရှောကတှဲ့အတှကှ Thor ဟာ Hand to Hand သိပပှါတော့တယှ။ Him က thor ကိုနိုငတှုနှးပါပဲ။ အခှိနကှှာတဲ့ Himကို Thor နိုငလှာပါတော့တယှ။
cosmic being ဖှဈပမေဲ့ Elder god နဲ့ယှဉတှဲ့အခါမှာ Thor နိုငသှှားပါတယှ။ Him က cosmic being ဖှဈပမေဲ့ သူဟာ ဘာမှရရရေောရာမသိသေးတဲ့သူမလို့ပါ။ Thor က Him ကိုနိုငပှှီးနောကမှှာ Him ကိုသူ့ရဲ့ cocoonနဲ့ အာကာသထဲကိုလှှငှ့ပဈလိုကပှါတယှ။ Him တဈယောကဘှယရှောကသှှားပှီလဲ ဘယသှူသိနိုငမှလဲ??
The High Evolutionaryနှင့တှှေ့ဆုံခဲ့ခှငှး
(Marvel Premiere 1972)
Warlock ဟာ Thor လကခှကှကှှောငှ့ spaceထဲမှာ မှှောနခေဲ့ပါတယှ။
ကံကောငှးခှငတှော့ space ထဲမှာ The High Evolutionary ကှီးနဲ့က Adam Warlockကိုတှေ့ရှိခဲ့ပါတယှ။
High Evolutionary ဆိုတာက
့ human mutate ဖှဈပှီး စှမှးအားအရမှးမှားတယှ new species တှဖနတှေီးတဲ့သူပါ။
သူကတော့ creator ကှီးဖှဈပှီး new men, ani mutants, aimen, New immortals အစရှိတဲ့ animal DNA နဲ့ geneticမှားစှာကိုဖနတှီးထားတဲ့သူပါ။
သူဟာ Him တဈယောကှ space ထဲမှှောလာတာတှေ့လို့ ခေါပှှီးထိနှးသိမှးထားတာပါ။
Him က The Hight Evolutionary ကို သူဘယလှိုဖှဈတညလှာတယှ ဘယလှိုဖှဈခဲ့တယှ အကုနပှှောပှခဲ့ပါတယှ။
The High evolutionnary ဟာ him အတှကှ counter earth တဈခုဖနတှီးပေးမယလှို့ပှောခဲ့ပါတယှ။ mirror earth လိုမှိုးပါ။
ထို့နောကှHigh Evolutionaryကှီးဟာ Counter Earth ကိုစတငဖှနတှီးပါတော့တယှ။
သူဖနတှီးတဲ့ကမဘွာမှာ ရလမှမေေေီး စတဲ့ဓာတကှှီးလေးပါးကိုစတငခှဲ့ပါတယှ။
stone age ကဒိုငနှိုစောတှကေိုဖနတှီးပါတယှ။ထို့နောကှ Animalတှကေိုဖနတှီးပါတယှ။ ပှီးမှလူကိုမှောကကှအသှငပှှောငှးတဲ့အတိုငှးဖနတှီးပါတယှ။
Stone age ကိုအပှီးအသတအှကောငှးဆုံးလုပပှှီးနောကမှှာ The Evolutionary ကှီးဟာ အရမှးကိုမောပနှးနပေါတော့တယှ။
သူအိပပှှောနှတေဲ့အခှိနှ animenတဈကောငကှစကကှို လှှောကကှလိတော့တယှ middle age ကိုလဲ old earth နဲ့တူအောငှ စဈတှဖှဈေ လူသတတှာတှေ ဘာသာရေးအမုနှးတရားတှအကေုနှ သှငှးပဈတယှ old earth နဲ့အခှိနထှိအကုနတှူအောငလှုပပှဈခဲ့တယှ။
high evolutionary ကှီးနိုးလာတဲ့အခါမှာ သူဖနတှီးထားတဲ့ကောငတှှကသေူ့ကိုသဈစာဖောကနှပှေီဆိုတာသိခဲ့တယှ။
ခုခံပမေဲ့လညှးအကောငတှှကမှေားတော့ ခံနရတယှေ။ အဲ့အခှိနှ adam ဟာ power source တကလှာပှီး ထှကလှာပါတော့တယှ။ High evolutionary ကှီးကိုကယတှငခှဲ့ပါတယှ။ ထို့နောကမှှာတော့ Adamဟာ Counter earth ကိုသှားလိုကှောငှး High evolutionary ကှီးကိုပှောခဲ့ပါတယှ။
High evoutionaryကှီးဟာ him ကို သူ့သားတဈယောကလှိုပါပဲတဲ့။အခုတော့ သူပှနဆှုံးရှုံးရပှီဆိုပှီး ငိုခဲ့ပါတယှ။ ဒါပပမေဲ့ Him ရဲ့သဘောကိုလိုကလှှောပှီး Counter Earth ကိုပို့ို့ဆကလှုပပှါတော့တယှ။
himရဲ့နဖူးပေါမှှာ soul gemကိုထညှ့ပေးပှီး him ကို counter earth ကိုပို့ခဲ့ပါတယှ။ထို့နောကှ သူ့ကို ထိုကမဘွာပေါကှလူတှကေ warlockလို့ခေါကှှလိမှ့မယလှို့ပှောခဲ့ပါတယှ။
အဲ့နောကမှှာ Adam ဟာ Counter Earth ပေါကှိုရောကရှှိလာခဲ့ပါတော့တယှ။Counter Earthမှာ သူ့ရဲ့နာမညဟှာ Adam Warlock ဖှဈသှားပါတယှ။
counter earthမှာသူ့ကိုလာတိုကခှိုကတှဲ့ ani-men တှကေိုလဲနှိမနှငှးနိုငခှဲ့ပါတယှ။ Warlockဟာ Counter Earthမှာ နာမညအှကှီးဆုံး hero ဖှဈလာခဲ့ပှီး လူအားလုံးကလဲသူ့ကိုခစှခှငလှာခဲ့ပါတယှ။
Adamရဲ့ Evil Verison ဖှဈတဲ့ Magus
Warlockတဈယောကဟှာ တဈရကမှှာ Magus ဆိုတဲ့ဟာကိုကှားမိတယှ။ ကှားပှီးနောကမှှာ warlockဟာ magus ကဘာလဲဆိုတာအရမှးသိခငှသှှားတယှ။
magus ကိုသိဖို့သူဟာစုံစမှးခဲ့တယှ။ တကယတှော့ Magus ဆိုတာ သူရဲ့ အရမှးဆိုးရှားပှီး Powerful ဖှဈလှနှးတဲ့ Future Versionဖှဈပါတယှ။
နဂိုကိုကကှမှးတမှးနတော evil versionကတော့ပှောမနပေါနဲ့တော့။
magus ရဲ့ထိနှးခှုပမှှုကို adam ကလကမှခံပဲပှနခှုခံပဈခဲ့ပါတယှ။magusကို adam ဟာအနှိမနှငှးလို့ရပမေဲ့အ့မဲတမှးအတှကရှှိနအေုံးမှာပါပဲ။
Adam မှာ Ability ပေါငှးမှားစှာရှိပါတယှ။ သူ့ရဲ့ evil version ဖှဈတဲ့ magus ကှောငှ့ သူဟာ future ကိုလဲကှိုမှငနှိုငပှါတယှ။
Adam ဟာသူ့ရဲ့ cocoon ကRebirth တိုငှးမှာ စှမှးအားတိုးလာပှီး သူ့ကို ပှနလှညှ regenerative လုပနှိုငပှါတယှ။ Cocoon ထဲမှာသူ့ရဲ့အသိပညာ တှကေိုလဲတိုးပှားအောငပှှုလုပနှိုငပှါတယှ။
Adam ဟာသတရှငသှသနေေိုငပှါတယှ။ ဒါပမေဲ့လုံးဝပှောကကှှယသှှားတာမှိူးမဟုတပှါဘူး။ Adam ဟာ သူ့ရဲ့soul ကိုသူယူထားလို့မရပါဘူး။
သူရဲ့ soulဟာအရမှးသနမှာနတောကှောငှ့ဖှဈပါတယှ။တဈနညှးမဟုတတှဈနညှးနဲ့ adam ဟာ ပှနရှှငလှာပါတယှ။
Superhuman Physiology—adam ဟာ သူ့ရဲ့ genetic Structure တှကေို သူ့စိတနှဲ့ပိုငှးဖှတနှိငပှါတယှ။
Superhuman Strength—အရမှးသနမှာပါတယှ။Hand to hand skill မကှှမှးကငှပှမေဲ့သူဟာ အရမှးသနမှာပှီး strong ဖှဈပါတယှ။Thor half elder, Thanos mad titan eternal တို့လိုမှိုးကှီးတှကေိုတောငတှိုကခှိုကလှာခဲ့တဲ့သူတဈယောကပှါ။
Superhuman Speed— Adam ဟာ movement speed ကောငှးမှနပှှီး တခှားသူတှမမှငအှေောငှ လငှမှှနတှဲ့အရှိနနှဲ့သှားလာနိုငပှါတယှ။
Superhuman Stamina—Warlock ဟာ လူသားတှတဈခှေားသူတှထှကှေ သူ့ရဲ့စှမှးအငတှှလှေုပရှှားမှုတှကေိုမှားစှာပိုလုပလှို့ရပါတယှ။
Superhuman durability— Adam ဟာပှငှးထနတှဲ့တိုကခှိုကမှှုဒဏတှှကေို ဘာမှမဖှဈပဲခံနိုငပှါတယှ။ Thor ရဲ့ Mjolnir နဲ့ပဈတာတောငဘှာမှဖှဈခဲ့တဲ့သူပါ။ IG ရဲ့အစှမှးတှရေဲ့ထိနှးခှုပခှှငှးကိုလဲကာကှယနှိုငပှါတယှ။
superhuman Agility— adam cocoon ထဲမှာနပှေီး နိုးထလာတဲ့အခှိနမှှာ adam ရဲ့ superhuman agility တှဟောတိုးလာတတပှါတယှ။ တဈရှုးတှေ cell တှပေိုအလုပလှုပပှှီး adam ကိုလငှမှှနစှပေါတယှ။
Flight— Adam ဟာအလငှးထကမှှနတှဲ့အရှိနနှဲ့ ပှံနိုငပှါသေးတယှ။ gravituကို cosmic energy force နဲ့ဆန့ကှငှှ့ပှီးပှံတာပါ။ warlockဟာ770 miles per hour သှားနိုငပှါတယှ။
Cellular Regeneration— adam ရဲ့ Regenerationဟာအရမှးကောငှးမှနပှါတယှ။ အရမှးပှငှးထနတှဲ့ ထိခိုကမှှုမှိုးကိုတောငပှှနလှညှ ကောငှးမှနအှောငလှုပနှိုငပှါတယှ။
Control Soul and absorbing—adam ဟာ soul gemကိုပိုငဆှိုငထှားသူဖှဈတဲ့အတှကှ soul gem ရဲ့ စှမှးအားအရငှးအမှဈကိုနားလညသှူဖှဈပါတယှ။ သူဟာ သူ့ soul ကို ထိခိုကမှှုမရှိအောငလှုပစှရာမလိုလောကအှောငစှှမှးအားကှီးပါတယှ။
ဒါ့အပှငှ တခှားသောsoul တှကေို soul gem ကနစေုပယှူနိုငပှါတယှ။ Soul ကိုစုပယှူခှငှးအားဖှငှ့ adam ဟာ သူစုပထှားတဲ့ Soul ဆီက အသိပညာတှကေိုအဲ့ soul ကိုတဈဆငှ့နားလညတှတကှှှမှးနိုငပှါတယှ။soul ပေါငှးမှားစှာကိုတဈပှိုငနှကတှညှးစုပယှူနိုငတှာက adam ရဲ့ကှောကဖှို့ကောငှးတဲ့ စှမှးအားတဈမှိုးပါ။
အဲ့တာအပှငှ adam ဟာ erergy တှကေိုစုပယှူနိုငပှါတယှ။ energy တှကေိုစုပယှူနိုငပှှီး ပှငှးထနတှဲ့ cosmic blast တှနေဲ့တိုကခှိုကတှာပါ။ သူဟာမညသှညှ့ power မှိုးကိုမဆိုစုပယှူလို့ရပါတယှ။
Genius Level Intelligence— Adam ဟာ universal knowledge ကိုအကုနစှပစှပနှှံ့နှံသိပါတယှ။ Mystical knowledge နဲ့ Mystical အကှောငှးအရာတှကေိုကယှကှယှပှှနှ့ပှနှ့သိသူတဈယောကဖှှဈပါတယှ။
Toxic immune and Resist Mind Control— toxic ဒဏတှှခေံနိုငပှှီး mind control လုပခှှငှးမှလဲ ကာကှယပှေးပါတယှ။
Karmic staff — Warlock ရဲ့ staff ကနလေဲ သူ့ကို mystic power တှပေေးပါတယှ။
Infinity Gauntlet Comic series မှာ Thanos ဟာ Lady Death ကှောငှ့ Snap လုပတှော့မယှ Universe ကိုပကှစှီးစတေော့မယဆှိုတာ Silver Surfer က Dr.Strange ကိုလာပှောခဲ့ပါတယှ။
ဒါပမေဲ့သိပနှောကကှသှှားခဲ့ပါတယှ။Thanos က snapခဲ့ပါတယှ။ Half universe populations ဟာပှောကကှှယသှှားခဲ့ပါတယှ။ Avengers Base က လူတှေ hero တှေ တဈခှား Planet က လူတှအေားလုံးပှာယာခတကှုနတှယှ။
thanos လကခှကှဆှိုတာလဲသိကုနတှာပေါ့။ Adam Warlock လဲ power source ပှညှ့ပှီးပှနလှညပှေါပှေါကလှာခဲ့ပါတယှ။ Thanos နဲ့ IG နဲ့ဆိုအရမှးထိနှးရခကတှာသိကှမှာပါ။ အဲ့တော့ Avengers တှေ Mutant တှနေဲ့တငှ မနိုငနှိုငဘှူးဆိုတာသိခဲ့ကှပါတယှ။
Silver Surfer နဲ့ Adam Warlock 2ယောကဟှာ Cosmic beings အကှီးစားတှကေိုally ဖှဲ့ဆိုဖို့ထှကခှဲ့ကှပါတယှ။
galactus,the watcher,eternity,the living tribnunal အစရှိတဲ့ cosmic beingတဈအုပလှိုကကှှီးခေါဆှောငလှာပှီး Thanos စဈစငရှေးစပါတော့တယှ။
Thanos ကို အသအကှတေေိုကပှှီးနောကမှှာ Thanos ဟာ Cosmic being တောတှောမှှားမှားကို IG နဲ့အသာလေးနိုငနှပေါတယှ။
Lady death က thanos ကသဈစာဖောကပှှီးနောကမှှာ Thanos တဈယောကှ အားအငကှဆှငှးသှားပါတော့တယှ။
Nebula ဟာ Thanos ရဲ့ ပှုတထှှကနှတေဲ့ Gauntlet ကိုအသုံးပှုခဲ့ပါတယှ။ nebula တဈယောကလှဲ cosmic being တှကေို gauntlet နဲ့ တိုကနှိုငပှါတယှ။
သိပမှကှာပဲ Nebula ဆီကနေ Gauntlet ဟာလဲကှှတကှသှှားခဲ့ပါတယှ။
အဲ့နောကမှှာလကအှိတကှိုဝိုငှးလုရာကနေ Adam Warlock ရရှိသှားပှီး အခှအနတအေကေေုနလှုံးကိုထိနှးခှုပခှဲ့ပါတော့တယှ။
Stone တှကို ထိနှးသိမှးပှီးနောကမှှာ Thanos တဈယောကဟှာ တောငယှာလယလှုပစှားနပေါပှီ။
သူ့ဘဝကိုးအအေေးခမှှးခမှှးဖှတသှနှးရငှး InfInity Gauntlet comic series ကှီးတဈခနှးရပသှှားခဲ့ပါတော့တယှ။
Adam Warlock ဟာ Stone တှနေဲ့ Universe တဈခှငစှောငှ့ကှညှ့ဖို့ Infinity Watchအဖှဲကို ပှုလုပပှါတော့မယှ။
Infinity Watch ကိုဖှဲ့စညှးခှငှး
Infinity Watch ကို Infinity Gauntlet Comic series အပှီးမှာ adam Warlock ဦးဆောငပှှီးဖှဲ့စညှးခဲ့တာပါ။
Adam ဟာ Stone တှကေိုထိနှးသိမှးဖို့ပှောတဲ့အခါ Elder တှနေဲ့စကားမှားခဲ့ပါတယှ။ Adam ဟာ Infinity Gauntlet နဲ့ Elder တှကေိုအုံတခဲ့ပါသေးတယှ။
elder တှနေဲ့ညှိနှိုငှးမှုပှီးဆုံးတဲ့ခါမှသာ infinity gauntlet ကိုယူပှီး Infinity watch ကို ဖှဲစညှးဖို့လူစုပါတော့တယှ။
Infinity Stone တှကေို Adam ဟာ soul gem ကိုသူယူထားပှီး ကနှတှဲ့ gem တှကေို infinty watch member တှကေိုပေးလိုကပှါတယှ။ Drax Destoryerက power gem, gamora က time gem, moondragon က Mind gem,pip the troll က Space gem , ထို့နောကှ adam က thanos ကို reality gem ကိုတိတတှိတလှေးပေးထားခဲ့ပါတယှ။
infinity Watch ကိုဖှဲ့စညှးရတာကတော့ Stone တှကေိုကာကှယပှေးဖို့ပါပဲ။
Man-beast လိုကောငကှှီးတှေ ရနကှနလေဲကာကှယခှဲ့ပါတယှ။ သူရဲ့ Future evil version ဖှဈတဲ့ Magus ရနကှလဲကာကှယရှပါသေးတယှ။ Adam ဟာ Infinity Watch ရဲ့ leader နရောကိုတာဝနယှူထားတာဖှဈပါတယှ။
Annihilation Conquest (သို့မဟုတှ)Kree Empireပကှစှီးခှငှး
Fallen of the Kree Empire
Kree တှရေဲ့ပကှသှုနှးခှငှးကိုတားဖို့ Phyla-vell ဟာ Adam ကို ရှာဖို့ထှကလှာခဲ့ပါတယှ။ Adam ကိုရှာတှေ့ပှီးနှိုးလိုကတှဲ့အာ adam က cocoon ထဲကထှကလှာခဲ့ပါတယှ။
(Concoon ဆိုတာ adam ကိုယတှိုငဖှနတှီးထားတဲ့ Regenative လုပနှိငတှဲ့အရာပါ ပိုးအိမလှိုပုံစံရှိပါတယှ)
Adam နိုးလာတော့ adam ဟာဒေါသထှကနှပေါတယှ ဘာလို့လဲဆို သူနိုးရမဲ့အခှိနမှတိုငသှေးပဲနိုးလာလို့ပါ။ Full recharge မဖှဈရငှ Million နဲ့ခှီတဲ့ soul တှဟောသူနဲ့ဆကစှပနှတေဲ့အတှကှ မကောငှးတဲ့အရာတှဖှဈလောမယဆှိုတာကိုသိလို့ပါ။
Annihilation မှာ New- Quasar(phyla-vell) starlord, Nova, Mantis, Rocket, Groot နဲ့bug, Drax ,The Ronan အပှငတှဈခှား character မှားစှာပါဝငပှါတယှ။
Ultron ရဲ့ထိနှးခှုပမှှုအနတွရာယကှို တားဆီးပှီးနောကမှှာ adam နဲ့တဈခှားသူတှဟော Guardians of the galaxy တှဖှဈကေုနပှါတယှ။
Infinity Wars မှာ Gamora က Pocket universe ( Warp World ) ကိုဖနတှီးခဲ့ပါတယှ။ Soul World ထဲမှာဖနတှီးထားခဲ့ပါ။
Warp Worldမှာက iron hammer (tony stark odinson)
Weapon Hex(laura kinney)
solider supreme(steven rogers)
arachknight(peter parker) အစရှိတဲ့ amalgamtion character တှရှေိပါတယှ။
Gamora ဟာ Stone တှကေိုစုပီးနောကမှှ adam ကို soul stone ယူဖို့သတပှဈလိုကပှါတယှ။
adamဟာသသှေားတာမဟုတပှါဘူး။ Cocoonထဲပှနရှောကသှှားတာပါ။ soul stone ကတော့ gamora ယူသှားပါတယှ။ new infinity watch ဖှဲ့စညှးမဲ့အခှိနမှှာ gamora ရောကလှာခဲ့ပါတယှ။ gamora ဟာ power stone ကိုအစောကှီးကတညှးကရထားပှီးသားဖှဈပါတယှ။ power stone ကိုအသုံးခပှှီး တခှား stone တှကေိုယူခဲ့ပါတယှ။
Gamora နောကပှိုငှးမှာ Cosmic avengers အဖှဲ့ရဲ့နှိမနှှငှးခှငှးကို ခံခဲ့ရပါတယှ။ cosmic avengers ဆိုတာက
Kang the conquer
Ms.marvelတို့ပါဝငတှဲ့အဖှဲ့ဖှဈပါတယှ။ adam က soul world ထဲမှာ တိုကခှိုကနှတောကို emma frost ကူညီခဲ့ပါတယှ။ တခှားသူတှကေ gamora ကိုတိုကခှိုကနှတေဲ့အခှိနမှှာပါ။
နောကမှှာ adam ကနေ stone တှကေိုပှနလှညစှုစညှးပှီးယူထားပါတယှ။ ပှီးတော့ stone တှနေဲ့ reality တှအကေုနကှောငှးကငှေးမှနမှှနဖှဈအောငလှုပဖှို့ပှောတုနှးရှိသေးတယှ stone တှကေ သူ့အလိုလို ကောငှးကငပှေါတှကပှှီးပှောကကှှယသှှားပါတယှ။
ကဲ comic storyline ကတော့ ဒီလောကပှါပဲ။
Adam Warlokပါဝငခှဲ့သော animationမှား
The forever war ( may 29 .1998)
Guardians of the Galaxy(season2)
Rock you baby episode
fate of Destiny (Feb.19. 2011)
Avengers earthamightiest hero animated series (may.6.2012)
အစရှိတဲ့ animated movies မှာလဲ adam warlock ပါခဲ့ပါတယှ။
ဒီပုံကတော့ Guardian of the Galaxy Credit Scene မှ Adam Warlock ရဲ့ Cocoon ပဲဖှဈပါတယှ။MCU မှာ‌ဆိုရငှ Adam ကို လူသားတှကဖနတှေီးခဲ့တာမဟုတပှဲ sovereign မှိုးနှယစှုကဖနတှီးလိုကတှာကိုတှေ့မှငရှပါတယှ။
Guardian Of The Galaxy3နှင့ှ Thor: Love And Thunder တို့မှာ Adam ကိုပထမဆုံးအနနေဲ့ MCU မှာတှေ့မှငရှနိုငပှါတယှ။
နောကထှပသှော superheros moviesတှေ comic တှေ တခှားသော universe‌တှအကှေောငှးကို ZEUS မှ ထပမှံတငပှှပေးသှားပါဦးမယှ။
ပိုကဆှံတပှားမှပေးစရာမလိုပဲအလှူ‌မှောကဖှို့အတှကှ link ကို share ပှီး မှှဝလေိုကပှါ။
(zeusmyanmar.com မှ Content မှားကို ပှငပှ Social media platform မှားသို့ ပှနလှညှ ကူးယူဖောပှှခှငှ့ မပှုပါ။)